दुखद खबर: अर्घाखाँचीमा फेरि बस दुर्घटना भएको छ (नेपालिको मन नै खिन्न भएको छ)
November 27, 2019 by साहारा संदेश
अर्घाखाँचीको नरपानीमा बस दुर्घटना भएको छ । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क बाट बुटवल तर्फ जाँदै गरेको लु २ ख २१६८ नम्वर बस दुर्घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घटनामा के कति क्षति भयो भन्ने बारेमा बिस्तृत बिवरण आउँन बांकी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस । के तपाइँले परजिवीको बारेमा सुन्नु भएको छ ? परजिवीलाई एलियन पनि भन्ने गरिन्छ । एलियन आएर हाम्रो पृथ्वीलाई हमला गरेर ध्वोस्त पारिदिने कुराहरु पनि अवस्य सुन्नु भएको होला । तर त्यो भन्दा पनि पहिला के तपाइले यो सोच्नु भएको छ कि परजिवी साँच्चै नै हुन्छन ?
यु एफ ओ अर्थात एलियन को साधन धर्तिको आकाशमा देखिएको घटना पनि एकदमै प्रख्यात छ । कतिले त एलियन अर्थात परजीवी हरु नै हाम्रो पृथ्वी मा आएको खबर पनि नासालाई दिएका छन । तर नासाले यस्को बारेमा प्रतिक्रिया नदिएको भने पक्कै पनि होइन ।
यु एफ ओ को तस्विर सार्वजनिक त भएको थियो तर ती फोटाहरु स्पस्ट नभएका कारणले नासाले ठ्याक्कै भन्न भने सकेको छैन । एलियन भनेको डरलाग्दो कुरा पक्कै पनि हैन । सायद होला तर तलको भिडियो हेरेपछी मात्र थाहा हुन्छ । बाहिरी ग्रहमा जीवन नहोला भनेर चाहिँ पक्कै पनि भन्न सकिँदैन ।
यदि कुनै बाहिरी ग्रहमा कमिला मात्र पाइयो भने पनि त्यही कमिला पनि परजिवी नै हो । अब कुनै कमिला आएर धर्तिलाई हानी पुर्याउँछ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र ? उनिहरुको बुद्धिमत्ता पनि मानिस जस्तै नहुन पनि सक्छ्न ।
Prevभारतलाई केपि ओलिको चेतावनी: सिमाका भारतीय सेना भगाएरै छोड्ने (पूरा पढ्नुहोस)
Nextप्रदेश न २ को विकासमा कृषि शैक्षिक क्रान्तिको महत्व नेविसंघ युवा नेता -शशिन्द्र मोहनराज